ISpringbok isethubeni lokuqeda ishobolo - Bayede News
ISpringbok isethubeni lokuqeda ishobolo
by nguQhelani Msweli
UMsweli uyintatheli yezemidlalo engxile kwikhilikithi nombhoxo.
Zimkhalele owe-IFP obezongenela isikhundla
AMabhokobhoko azimisele ukukhipha inkunzi esibayeni sayo ezicijela eyomhlaba osekungabakhwekazi kuwona
AMABHOKOBHOKO selokhu agcina ukunqoba iRugby Championship isabizwa ngeTri-Nations ngowezi-2009. I-Argentina abazobhekana nayo ngoMgqibelo yayingakabi yingxenye yalo mqhudelwano egcina ukuwunqoba aMabhokobhoko. ISpringboks (Amabhokobhoko) isethubeni lokuqopha umlando iwunqobe okokuqala lo mqhudelwano.Lokhu kuza emveni kokudlala kahle kweqembu linqoba ngamaphuzu angama-35 kwali-17 lakwazi ukuthola nephuzu elingeziwe libhekene ne-Australia e-Ellis Park, ladlala ngokulingana ngamaphuzu ali-16 neNew Zealand eWellington.AMabhokobhoko azobhekana ne-Argentina kusasa edinga ukunqoba nakanjani ukuze abe ngompetha beRugby Championship e-Estadio Padre Ernesto Martearena, eSalta.
Ukwenza kahle kwawo kulo mqhudelwalo kuzosiza kukhuphule ukuzethemba kubadlali ngaphambi kweNdebe YoMhlaba ezoqala zingama-20 kuMandulo eJapan. Umdlalo wangoMgqibelo kubhekeke ukuba ube ngoshubile, abadlali bakuleli bazobe bebheke ukuzibonakalisa ngaphambi kokuba umqeqeshi uRassie Erasmus amemezele iqembu azogadla ngalo kweyomhlaba.
Isekela mqeqeshi uMatt Proudfoot uthe, “Singathanda ukunqoba umdlalo, kodwa thina sigxile ekuqhubekeni nomdlandla esawathola sibhekene ne-Australia neNew Zealand kanti ngaphezu kwalokho silungiselela neNdebe YoMhlaba.”I-Argentina (Pumas) ayisekho emathubeni okunqoba iRugby Championship emveni kokuhlulwa yomibili imidlalo eyidlale ne-All Blacks neWallabies. Ukunqoba umdlalo wangoMgqibelo kungayisiza ibuyise ukuzethemba ngaphambi kwemidlalo YeNdebe YoMhlaba.
AMabhokobhoko azothembela emlandweni njengoba emidlalweni eli-14 ayidlale e-Argentina esahlulwe imidlalo emibili anqoba eli-11 adlala ngokulingana kowodwa. UProudfoot uthe bayazazi izinselelo zokudlala eSalta njengoba emidlalweni emibili abayidlale khona banqoba owodwa bahlulwa komunye. “Sidlalile nabo phambili eSalta sanqoba kodwa ngonyaka wezi-2017 basihlula eSalta. Ngakho siyazazi izinselelo ezilethwa i-Argentina uma idlalela ekhaya.”
Amabhokobhoko azimisele ukwenza kahle kweyeNdebe YoMhlaba njengoba ephumuze abadlali abaningi emidlalweni yeRugby Championship aphinde azama nokuhlola izindlela ezihlukene zokudlala ukuze akwazi ukuthola iqembu azohlasela ngalo eJapan.Naphezu kwalokhu iqembu likhombisa ukuba namava njengoba lingakahlulwa selokhu kuqale umqhudelwano iRugby Championship. EzikaRassie Erusmus zaqeda endaweni yesithathu emidlalweni yeNdebe YoMhlaba yowezi-2015.
Ingilosi yeBlitzbok nethemba lokuqumba izethenjwa
KweyeNdebe YoMhlaba liseqoqweni elithathwa njengelingekho nzima elifaka iNew Zealand, iNamibia, i-Italy, neCanada.U-Erasmus uthi indlela iqembu eselihlangene ngayo iyodwa kuphela into eliyibhekile ukunqoba. Uthi osekuphinde kwenza kwanzima ukukhipha abadlali abayisithupha eqenjini ukuze akwazi ukusala nabangama-31 azogadla ngabo.
Ukudlala kahle kwabadlali abafana noHerschel Jantjies osanda kuqokelwa kuleli qembu sekubuyise ithemba kubalandeli njengoba sebevele bemfuna eqenjini elizoqala umdlalo uma elakuleli selibhekene neNew Zealand emdlalweni wokuvula e-International Stadium Yokohama zingama-21 kuMandulo ngowezi-2019.INingizimu Afrika izofuna ukubuyisa izinduku kulo mdlalo njengoba yakhishwa iNew Zealand emdlalweni owandulela owamanqamu ngamaphuzu angama-20 kwayi-18 emdlalweni wangowezi-2015.
Imidlalo yokugcina yeRugby Championship
INingizimu Afrika izobhekana ne-Argentina e-Estadio Padre Ernesto Martearena, eSalta ngehora lama-21:40.
I-Australia izobhekana neNew Zealand ePerth Oval ngehora le-10:45.
nguQhelani Msweli Aug 8, 2019